Looks Nepal | » काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टर मध्ये काठमाण्डौं विश्वविध्यालयकाे हिस्सा कति ? Looks Nepal काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टर मध्ये काठमाण्डौं विश्वविध्यालयकाे हिस्सा कति ? – Looks Nepal
Nov, 24, 2019	looksnepal
मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका २६ हजार डाक्टर मध्ये ४४.०३ प्रतिशत डाक्टर काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट उतिर्ण विद्यार्थि रहेको पाईएको छ ।
यस बाहेक विश्वविद्यालयबाट १ हजार ९ सय ७१ पोस्ट ग्राजुयट, विडिएस ५ सय ५६, नर्सिङ्ग १ हजार ५ सय २९ र फिजियोथेरापीमा ९० जना मेडिकल विद्याबाट दीक्षित भैसकेका छन् ।
काठमाडौं विश्वविश्व विद्यालयको २५ औं दिक्षान्त समारोहमा यो तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । यस वर्ष थप १ हजार ९८ जना एमबीबीएसका विद्यार्थी दिक्षित भएका छन् ।
विश्वविद्यालयको २५ औं दिक्षान्त समारोह सम्पन्न
काठमाडौं विश्वविद्यालयको २५ औं दिक्षान्त समारोहका पहिलो चरणमा १ हजार ६ सय ४ जना दिक्षित भएका छन् । सधैं जसो यस बर्षको पहिलो दिक्षान्तमा मेडिकल क्षेत्रका स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरु दिक्षित भएका हुन् । जस मध्ये एमसीएच÷डिएम, एमडी, एमएस, एमएस्सी र एमडीएसका १ सय ४८ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन, भने एमबीवीएसका १ हजार ९८ जना दीक्षित भएका छन । बीडीएसका २ सय १८, बीएस्सी ईन नर्सिङ्गका १ सय १६ र बीपीटीका २४ जनालाई दीक्षित भएका छन् । दीक्षित भएकाहरु मध्ये भारत, भुटान, श्रीलंका, मालदिभ्स, अमेरिका, बेल्जियम गरी ६ देशका २ सय ४६ जना अथार्त कुल संख्याको १५.३४ प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी छन् । उर्तिण मध्ये महिला ५३.८० प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये उत्कृष्ट विद्यार्थी लुम्विनी मेडिकल कलेजका विवेक पौड्यालले स्वर्णपदक प्राप्त गरेका छन् ।
दीक्षित भएकाहरु मध्ये भारत, भुटान, श्रीलंका, मालदिभ्स, अमेरिका, बेल्जियम गरी ६ देशका २ सय ४६ जना अथार्त कुल संख्याको १५.३४ प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी छन् । उर्तिण मध्ये महिला ५३.८० प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये उत्कृष्ट विद्यार्थी लुम्विनी मेडिकल कलेजका विवेक पौड्यालले स्वर्णपदक प्राप्त गरेका छन् । दिक्षान्त समारोहलाई सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा काठमाडौं विश्व विद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
पहिलो पटक एमसीएच र डिएम उपाधि ६ जनालाई
काठमाडौं विश्वविद्यालयले पहिलो पटक मेडिकल विद्याको माथिल्लो तहको एमसीएचरडीएम उपाधी ६ जनालाई प्रदान गरिएको छ ।
लगातार मेडिकल विद्यामा १५ वर्ष अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले मात्रै उक्त उपाधी प्राप्त गरेको छ । ति मध्ये एकजनालाई प्लाटिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी विषयमा एमसीएच उपाधी प्रदान गरिएको छ ।